Anosizato sy i Nanisana: 4-mi 2 000 hangonina amin’ny toerana manokana | NewsMada
Anosizato sy i Nanisana: 4-mi 2 000 hangonina amin’ny toerana manokana
Hangonina amin’ny toerana iray ny 4-mi rehetra eto Antananarivo ho fiarovana azy ireo amin’ny aretina Coronavirus. Anisan’izany ny eny ambany tonelina, ny eny ambany tetezana sy ireo mirenireny tsy manan-kialofana. Manodidina ny 2 000 izy ireo ny horaisina amin’ireo toerana roa: ny eny Nanisana sy ny eny Anosizato.
338 ireo raisina an-tanana eny Anosizato, ankizy avokoa ny 104 amin’ireo ary vehivavy ny 99, lehilahy kosa ny 53. Misy ireo vehivavy bevohoka, ny zaza menavava, ny olona manan-kilema ary ireo zokiolona tena marefo hita eny an-toerana.
Horaisin’ny kaominina Antananarivo Renivohitra an-tanana avokoa izy ireo ka hapetraka eny amin’ny toby eny Anosizato sy eny Nanisana. Efa nohajarina ny toerana handraisana ireo 4-mi ireo ahafahany mihiboka toy ny olona rehetra manan-trano mba tsy hirenireny. Asiana fahitalavitra sy efa misy fandrindrana ny toerana handraisana azy ireo hahafahany miaina sy mifitsaka tsara mandritra ny fihibohana.
Haharitra 15 andro ny fandraisana ireo 4-mi eny Nanisana sy eny Anosizato. Hohatsaraina arakaraka izay fivoaran’ny toe-draharaha anefa ny fitazomana azy ireo eny. Miankina amin’ny mety ho fitohizan’ny fanalavam-potoana amin’ny tokony ho fihibohana ny handraisana azy ireo sy ny hitazomana azy amin’ireo toerana ireo.